News Collection: एडल्ट सर्टिफिकेटको औचित्य के ? चपली हाइट हेरिरहेका बालकले भने -'साला'
एडल्ट सर्टिफिकेटको औचित्य के ? चपली हाइट हेरिरहेका बालकले भने -'साला'
एडल्ट सर्टिफिकेट अर्थात १६ वर्षभन्दा तलका दर्शकले नहेर्ने गरी दिईने प्रमाणपत्र । सिनेमा बनिसकेपछि सेन्सरमा पास गराउनुपर्छ । सेन्सर पास नगरी कुनै पनि सिनेमा सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न पाईंदैन । यसैले नेपालमा पनि तीन तरीकाबाट सेन्सर बोर्डले सेन्सर गरेको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । एउटा हो, यु – युनिभर्सल अर्थात सबैले हेर्न पाउने । यस्तै ए – एडल्ट अर्थात १६ वर्ष भन्दा तलका दर्शकले हेर्न नपाउने र अर्को हुन्छ पी.जी. अर्थात प्यारेन्ट गाईड्स -अभिभावकको उपस्थितिमा हेर्न सकिने) ।
यसरी यी तीन सर्टिफिकेट सिनेमालाई भिराईन्छ । तर यसरी यी तीन खालको सर्टिफिकेट दिनुको औचित्य के हो यो भन्ने चाहिं बुझ्न सकिएको छैन । चलचित्र चपली हाईटलाई एडल्ट सर्टिफिकेट दिएको थियो चलचित्र सेन्सर बोर्डले । सेन्सर बोर्डले एडल्ट सर्टिफिकेट दिएको चपली हाईट हेर्नका लागि हलमा १६ वर्ष भन्दा तलका दर्शक निकै धेरै पुगिरहेका छन् । बिहीबार काठमाडौंको जय नेपाल हल पुग्दा सिनेमा हेर्नका लागि १० वर्ष भन्दा तलका बालबालिका समेत पुगेको पाईयो ।
आखीर यसले अब एडल्ट सर्टिफिकेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ या उठाउँदैन ? सिनेमालाई दिएको सर्टिफिकेट किन लागु हुन सक्दैन ? निर्मातालाई त हलमा जतिसक्दो दर्शक पुगे उति नै फाइदा हो, तर राज्यले यसबारेमा किन अनुगमन गर्न सक्दैन ? जयनेपाल हलमा चलचित्र चपली हाईट हेरिरहेका एक कलिला बालकले सिनेमामा प्रयोग गरेको ‘साला’ भन्ने शब्द हलभित्र नै प्रयोग गरे । यो सुनेर उपस्थित सवै दर्शक हाँसे । यी बाहेक सिनेमा भित्र यस्ता शब्दहरु पनि प्रयोग गरिएको छ, जुन नेपाली समाजमा निककै अश्लिल भनि परिभाषित गरिएको छ ।
यदि बालबालिकाले नहेरुन भनेर सर्टिफिकेट भिराउने हो भने किन राज्यले यसबारेमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्न सक्दैन ? यदि सक्दैन भने यस्ता किसिमका सिनेमामा प्रयोग गरिएका संवाद र दृश्यलाई खुला रुपमा नेपाली दर्शकमाझ प्रदर्शन गर्ने अनुमति किन दिईन्छ भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अनुगमन गर्ने संयन्त्र त छैन नै । हलवालाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । एडल्ट सर्टिफिकेट पाएको सिनेमा चलाउने हलमा यदि कुनै बालबालिका हेर्न जान्छन् भने त्यहाँ रोक्नुपर्ने दायित्व हलवालाको हो । तर पैसाको मात्रै मुख हेर्ने प्रवृत्ति भएका हलवालाले बल्लबल्ल पाएको दर्शक किन गुमाउँथ्यो । जो जो आउँछन्, पैसा लिँदै भित्र पठाउँछन् ।
यसरी एडल्ट सिनेमा बालबालिकालाई हेर्न दिने हलवालालाई कार्वाही हुने नियम पनि अहिलेसम्म कार्वाही भएको उदाहरण छैन । एक बालकले हलमै साला भन्ने शब्द सिकेर जान्छ भने भोलि उसले घरमा, विद्यालयमा पनि अरु यस्तै खालका अश्लिल शब्द प्रयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन । एडल्ट सर्टिफिकेट दिएपछि यसको औचित्य पनि राज्यले पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ होईन । यस्ता किसिमका सर्टिफिकेट किन दिने ?